Ho tonga any Eropa ny Xiaomi Mi Band 4 amin'ny 18 Jona | Androidsis
11 Jona mandeha any asehoy amin'ny fomba ofisialy ny Xiaomi Mi Band 4, araka ny voamarina tato ho ato. Efa andiany fahefatra amin'ny tanan'akanjo marika Sinoa, izay fahombiazana eo amin'ny tsena. Ho an'ity taranaka vaovao ity, ny orinasa dia manolotra andiam-panovana maromaro momba azy. Ny iray amin'ireo zava-baovao lehibe dia ny lamba lamba, izay sary voalohany hitantsika tamin'ity herinandro ity.
Tsikelikely dia efa manana angon-drakitra ampy momba ny inona isika handao antsika io bracelet io. Ny iray amin'ireo fisalasalana dia ny hoe rahoviana no hisy ny daty famoahana azy. Na dia misy data vaovao efa mamela antsika aza daty famoahana an'ity Xiaomi Mi Band 4 any Eropa ity. Ho fohy ny fiandrasana.
Satria araka ny angona vaovao, Hanomboka amin'ny 4 Jiona any Eropa ny Xiaomi Mi Band 18. Herinandro aorian'ny fampisehoana azy dia azontsika atao ny mividy azy io amin'ny kaontinanta eropeana. Azo antoka fa afaka mividy amin'ny fivarotana marika sinoa sy amin'ny Internet ianao.
Amin'izao fotoana izao ity no daty nanambarana azy hivoaka any Italia. Na dia azo inoana aza fa ho tonga any Espana amin'ity daty ity ihany koa izy io, satria io karazana fandefasana io dia matetika no atao amin'ny andro iray ihany amin'ny tsena marobe. Na matetika tsy dia be loatra ny fotoana avy amin'ny firenena iray mankany amin'ny iray hafa.
Ny Xiaomi Mi Band 4 no mety ho fehin-tànana lafo indrindra izay natolotry ny marika sinoa hatreto. Ny fampiasana efijery OLED lehibe kokoa, dia tompon'andraikitra amin'ity fiakaran'ny vidiny ity. Na dia ambany lavitra noho ny safidy hafa aza ny vidiny, toy ny Samsung Galaxy Fit, misy ihany koa any Espana.
Soa ihany, amin'ity talata ity dia hanana fisalasalana momba izany isika. Avy eo haseho ity Xiaomi Mi Band 4 ity ary ho fantatsika izay rehetra nomanin'ny marika sinoa ho antsika amin'ity lafiny ity, miaraka amin'ity taranaka vaovao ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Ny Xiaomi Mi Band 4 dia efa manana daty fanombohana any Eropa